Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Ny vidin'ny fitsapana COVID-19 avo dia mety hampiato ny fanarenana ny dia iraisam-pirenena
Ny fandaniam-bola avo lenta amin'ny fanandramana COVID-19 dia mety hametraka ny fivezivezena ho an'ny olona sy ny fianakaviana
I Frantsa irery no nanaiky ny tolo-kevitry ny OMS ho an'ny fanjakana hitondra ny vidin'ny fitiliana ho an'ny mpandeha
Ny salan'isa farafahakeliny ho an'ny fanandramana dia $ 90
Ny salan'isa ambony indrindra amin'ny fanandramana dia $ 208
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia niantso ny governemanta mba hiantohana fa ny vidiny lafo amin'ny fanandramana COVID-19 dia tsy mametraka ny fivezivezena ho an'ny olona sy ny fianakaviana. Mba hanamorana ny famerenana amin'ny laoniny ny dia iraisam-pirenena, ny fitsapana COVID-19 dia tsy maintsy ho lafo ary koa amin'ny fotoana ilana azy, azo ampiasaina ary mahomby.
An Iată ny santionany amin'ny fandaniana amin'ny fitsapana PCR (ny fanadinana tadiavin'ny governemanta matetika) amin'ny firenena 16 dia naneho fiovaovan'ny tsena sy ny tsena. Anisan'ny zavatra hita ny:
Amin'ireo tsena nanaovana fanadihadiana dia i Frantsa irery no nanaiky ny tolo-kevitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) hitondran'ny fanjakana ny vidin'ny fitiliana ho an'ireo mpandeha.
Amin'ireo tsena 15 izay misy vidiny amin'ny fanandramana PCR ho an'ilay olona
Ny salan'isa farafahakeliny ho an'ny fanandramana dia $ 90.
Ny salan'isa ambony indrindra amin'ny fanandramana dia $ 208.
Na ny fakana ny salan'isa amin'ny vidiny ambany aza, ny fanandramana fanandramana PCR amin'ny saran'ny antonony dia hampiakatra be ny vidin'ny sidina ho an'ny tsirairay. Alohan'ny krizy, ny tapakila sidina an'habakabaka tokana, anisany ny hetra sy ny sarany, dia mitentina 200 $ (angona 2019). Ny fanandramana PCR $ 90 dia nampiakatra ny vidiny hatramin'ny 45% ka hatramin'ny 290 $. Manampia fanandramana hafa amin'ny fahatongavanao ary ny vidiny tokana dia hitsambikina hatramin'ny 90% ka hatramin'ny $ 380. Raha heverina fa ilaina ny fanandramana roa isaky ny lalana, ny vidin'ny salanisan'ny fiverenana mitsidika dia mety mitifitra $ 400 ka hatramin'ny 760 $.
Ny fiantraikan'ny vidin'ny fanandramana COVID-19 amin'ny dia ataon'ny fianakaviana dia ho mafy kokoa aza. Miorina amin'ny salan'isan'ny tapakila tapakila ($ 200) sy ny fanadinana PCR farany ambany ($ 90) indroa miverina, ny dia ho an'ny efatra izay mety mitentina $ 1,600 talohan'ny COVID, dia mety hitombo avo roa heny hatramin'ny 3,040 $ - miaraka amin'ny $ 1440 ho fanandramana fanandramana.
“Rehefa esorina ny fameperana ny fivezivezena eny amin'ny tsena anatiny, mahita fitakiana mafy isika. Toy izany koa no antenaina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Saingy mety hilefitra amin'ny delestazy izany amin'ny alàlan'ny fanandramana - indrindra ny fitsapana PCR. Ny fampiakarana ny vidin'ny vokatra rehetra dia hampihena ny fangatahana. Ny fiantraikany dia ho lehibe indrindra amin'ny dia lavitra (hatramin'ny 1,100 km), miaraka amin'ny salanisa vidin'ny $ 105, ny fitiliana dia mihoatra ny sidina. Tsy izany no tianao hatolotra ho an'ny mpandeha rehefa mivoaka amin'ity krizy ity izahay. Ny fandaniam-bola amin'ny fanandramana dia tokony ho tantanana tsara kokoa. Zava-dehibe izany raha te-hanavotra ny fizahantany sy ny asa fitaterana ny governemanta; ary aza ferana ny fahalalahan'ny dia amin'ny manan-katao, "hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.